Aeroflot kagburu ụgbọ elu Bangkok niile n'ihi ihe egwu dị na mbara ikuku Afghanistan
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Aeroflot kagburu ụgbọ elu Bangkok niile n'ihi ihe egwu dị na mbara ikuku Afghanistan
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọ gaghịzi ekwe omume ịzụta tiketi site na Moscow gaa Bangkok maka Septemba ma ọ bụ Ọktoba nke afọ a na webụsaịtị Aeroflot.
Onye na -ebu ọkọlọtọ Russia kwụsịrị ọrụ ikuku Bangkok.
Aeroflot na -ezere ikuku Afghanistan, na -ebupụ ụgbọ elu Thailand.
Thailand kwadoro asambodo ịgba ọgwụ mgbochi Russia maka ntinye ndị njem.
Onye na -ebu ọkọlọtọ Russia Aeroflot kagburu ụgbọ elu na isi obodo Thailand, Bangkok, n'ihi ihe egwu dị na mbara ikuku nke Islam Republic of Afghanistan.
Ọ gaghịzi ekwe omume ịzụta tiketi site na Moscow gaa Bangkok maka Septemba ma ọ bụ Ọktoba nke afọ a Aeroflot weebụsaịtị. Nchekwa ụgbọ elu Bangkok na -emeghe naanị ruo Ọgọst 21, 2021.
N'ụzọ na -emegide onwe ya, ndị ọchịchị Thai kwupụtara taa enyela ikike maka ndị njem Russia maka na -abanye Thailand yana asambodo ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 yana ọgwụ mgbochi Sputnik V nke Russia mere.
Na mbụ, ndị njem na-enweghị asambodo ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 site na otu ọgwụ mgbochi ọdịda anyanwụ nke ụwa niile matara, dị ka Moderna, Pfizer ma ọ bụ AstraZenica, ga-agarịrị mgbochi iche izu abụọ.
Ka ọ dị ugbu a, ihu igwe dị na Afghanistan dị oke egwu n'ihi ndị na -eyi ọha egwu Taliban, bụ ndị weghaara ike na mba ahụ.
Na Sọnde, Ọgọstụ 15, isi obodo Afghanistan, Kabul, dabara na mwakpo ndị Taliban. Ugbu a enwere okwu n'ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Kabul Hamid Karzai, dịka igwe mmadụ nke ndị bi na mpaghara na -achọ ịgbapụ na mba ahụ, ịgbanahụ ọchịchị Taliban.
Ụgbọ elu ndị si na Kabul na -adịkarị oge ma na -apụ ma na -apụkwa mgbe niile ka ndị Taliban 'na -akwụsịtụ' ụgbọ elu niile na -apụ n'obodo ahụ.